अब आउने नयाँ कार - प्रविधि - साप्ताहिक
अब आउने नयाँ कार
अटोमोबाइलमा नयाँ प्रविधि
गत फेब्रुअरी ९ देखि १४ तारिखसम्म भारतको दिल्लीमा सम्पन्न अटो एक्स्पो–२०१८ मा ६ लाख ५ हजार १ सय ७५ अवलोकनकर्ता उपस्थित थिए । सधैं झै यो वर्ष पनि अटो एक्स्पोलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । ग्रेटर नोयडाको इन्डिया एक्स्पो मार्टमा मोटर शो अर्थात् नयाँ कार तथा मोटरसाइकलहरू प्रदर्शित थिए भने नयाँ दिल्लीस्थित प्रगति मैदानमा अटो पार्ट्स तथा कम्पोनेन्टको प्रदर्शनी भएको थियो । नेपाली बजारमा भारतीय कार तथा मोटरसाइकल कै वचश्र्व रहेको सन्दर्भमा उक्त एक्स्पो नेपालीहरूको पनि चासोमा रह्यो किन भने यही मेलामा सार्वजनिक भएका सवारी साधन ढिलो–चाँडो नेपाल आइपुग्ने छन् ।
अटो एक्स्पो–२०१८ मा भारतका साथै संसारका विभिन्न देशका कार निर्माता कम्पनीको सहभागिता थियो । एक्सपोमा मारुती सुजुकी, होन्डा, हुन्डाई, टाटा, महिन्द्रा, बीएमडब्ल्यू र मर्सिडिजका साथै अन्य विभिन्न कम्पनीले आफ्ना ह्याचब्याक, सेडान, एसयुभी एवं कन्सेप्ट कार सार्वजनिक गरेका थिए ।
भारतीय गाडी निर्माता कम्पनी टाटा मोटर्सले ‘स्मार्ट मोबिलिटी–स्मार्ट सिटी’ थिममा आफ्ना सवारी साधन प्रदर्शनीमा उतारेको थियो । टाटाले ५ वटा इलेक्ट्रिक कार तथा १ वटा इलेक्ट्रिक बस प्रदर्शनीमा राखेको थियो । उक्त अवसरमा मारुती सुजुकीले पनि आफ्नो आगामी इलेक्ट्रिक कारको कन्सेप्ट सार्वजनिक गर्‍यो । कम्पनीले एसयुभी कन्सेप्टमा हाइब्रिड र इलेक्ट्रिक दुवै किसिमका कारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
‘क्लिन, कनेक्टेड एण्ड कन्भेनियन्ट’ थिमसहित महिन्द्राले भविष्यमा आउने आफ्ना कारको कन्सेप्ट प्रदर्शनीमा देखायो । महिन्द्रा सहरी क्षेत्रलाई उपयुक्त हुने एटम नामक विद्युतीय कार सार्वजनिक गर्‍यो भने १ वटा बस तथा ३ वटा नयाँ कारको कन्सेप्ट पनि सार्वजनिक गरेको थियो । महिन्द्राले केयुभी ३०० को इलेक्ट्रिक भर्सन सार्वजनिक गर्‍यो भने होन्डाले आफ्नो हाइब्रिड कार ‘क्यारिटी’ लाई प्रदर्शनीमा राखेको थियो । टोयोटाले ‘प्रियस’ हाइब्रिड कार तथा अन्य ७ वटा मोडलका इलेक्ट्रिक कारको कन्सेप्ट सार्वजनिक गर्‍यो । विश्वकै ठूलो विद्युतीय कार निर्माता बन्ने होडमा रहेको कियाले सन् २०२५ सम्ममा २५ वटा नयाँ मोडलका कार उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई एक्स्पोमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
हुण्डाई र रेनोले समेत इलेक्ट्रिक भेइकलको कन्सेप्ट सार्वजनिक गरे । मर्सिडिज, बीएमडब्लूजस्ता ब्रान्डले समेत हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक कारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्ना आगामी उत्पादनको कन्सेप्ट सार्वजनिक गरेका थिए । अटो एक्स्पोको सुरुवात नै मारुती फ्युचर एस कन्सेप्टको प्रदर्शनबाट गरिएको थियो । फ्युचर एस मारुती सुजुकीको कन्सेप्ट एसयुभी हो, जुन अन्य एसयुभीभन्दा सानो छ तर बोल्ड लुक्स र फिचरका कारण यसले आफ्नो साइजको कमीलाई पूरा गर्छ । यसको एक्स्टेरियर र इन्टेरियर दुवै शानदार छ । यसमा सेतो कलरको बोर्डरका साथ स्लिक एलइडी हेडलाइट छ भने यसको टायर पनि ठूलो छ ।
टोयोटा यारिस कारलाई पनि अटो एक्स्पोमा निकै नै रुचाइएको पाइयो । भारतमा यो कार यही वर्ष बिक्रीका लागि उपलब्ध हुने बताइएको छ । अब टोयोटा यारिसले होन्डाको सिटी, हुन्डाईको भर्ना तथा मारुती सुजुकीको सियाज आदि कारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
हुन्डाईले आफ्नो प्रसिद्ध ह्याचब्याक एलिट आई २० को नयाँ भर्सन अटो एक्सपो–२०१८ मा लन्च गरेको
थियो । यसको एक्सटेरियर र इन्टेरियर दुवैमा परिवर्तन गरिएको छ । यसको सेफ्टी फिचरमा विशेष ध्यान दिंदै ड्युअल एयरब्याग र एबीएस उपलब्ध गराइएको छ ।
अटो एक्स्पोमा होन्डा कार्स इन्डियाले आफ्नो नयाँ सबकम्प्याक्ट सेडान भर्सन अमेज प्रदर्शन गरेको थियो । यसको स्टाइलिस लुक्सलाई धेरैले मन पराएको पाइयो । कम्पनीका अनुसार यो कार यही वर्ष भारतीय बजारमा उपलब्ध हुनेछ । सेकेन्ड जेनरेसनको अमेजमा नयाँ बोल्ड डिजाइन, आकर्षक इन्टेरियर, अत्यधिक कार्यकुशल पावरट्रेन, राइड पर्फमेन्स तथा सानदार ड्राइभिङ डाइनामिक आदि विशेषता छन् ।
एचफाइभ एक्स टाटा मोटर्सको कन्सेप्ट एसयुभी हो । यो टाटा मोटर्सको नयाँ इम्प्याक्ट डिजाइन २.० सिद्धान्तमा आधारित छ । टाटाले यो एसयूभीलाई अर्को वर्षको सुरुवातमा बजारमा उतार्ने अनुमान गरिएको छ । अटो एक्सपोमा महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राले हाल प्रचलित टीयुभी ३०० मोडलमा आधारित नयाँ र कन्भर्टिबल एसयूभी टीयूभी स्टिंगरको कन्सेप्ट मोडल सार्वजनिक गरेको थियो । चार सिटयुक्त उक्त कन्भर्टिबल एसयुभीमा महिन्द्राले एमहक डिजेल इन्जिन प्रयोग गरेको छ । यसले १४० बीएचपी पावर तथा ३२० एनएम टर्क प्रदान गर्छ । एसयुभी र कन्टभर्टिबल दुवै मोडलमा अब्बल सावित हुन कम्पनीले यस्तो कन्सेप्ट निर्माण गरेको बताएको छ ।
एक्स्पोमा दक्षिण कोरियाली कार निर्माता कम्पनी कियाले एसपी कन्सेप्ट एसयुभी सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार भारतमा सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा उपलब्ध हुने बताइएको छ । यसको अघिल्लो भागमा रहेको एलइडी फ्रन्ट र पछिल्लो भागको टेल लाइट, स्लोपिङ रुफलाइन र कन्ट्रास्ट रुफका साथमा भएका अन्य फिचर हेर्दा यो भविष्यको उपयुक्त कार भएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
लक्जरी कार निर्माताका रूपमा परिचित मर्सिडिज बेन्जले एस सिरिजको लक्जरी कार मेब्याक एस ६५० लाई एक्स्पोमा राखेको थियो । अटो एक्सपोमा रेनोले नयाँ कन्सेप्ट कार ‘ट्रेजर’ प्रदर्शन गरेको थियो । यसलाई अटो एक्सपोको सर्वाधिक हट कार मानिएको छ । पूरै छत खुल्ने भएकाले यो कारमा सेल्फी लिनेहरू निकै थिए । यसको क्याबिन विशेष प्रकारको छ, जसलाई ज्वेलरी बक्स खोले जसरी खोल्न सकिन्छ । यो जीटी कन्सेप्टको दुई सिटे कार हो । यसलाई सबैभन्दा पहिले सन् २०१६ को पेरिस मोटर शोमा प्रदर्शन गरिएको थियो । यसमा फर्मुला ईमा आधारित ३ सय ५० बीएचपीको मोटर छ, जसले पछिल्लो पांग्रामा पावर पठाउँछ । यसले रेनोको भविष्यको डिजाइन फिलोसोफीलाई समेत प्रदर्शन गरेको बताइएको छ ।
लोभ लाग्दा बस
दिल्ली अटो एक्सपोमा विभिन्न कम्पनीले आकर्षक बस प्रदर्शन गरेका थिए । यी बसका बारेमा सुन्दा जो कोही अचम्मित हुन सक्छन् । खासगरी इलेक्ट्रिक बस तथा त्यसमा भएका विभिन्न फिचरका कारण यी बसले धेरैको ध्यान खिचेको बताइन्छ ।
पिनेक्कल स्पेसियालिटी कम्पनीले निर्माण गरेको बस कुनै लक्जरी अपार्टमेन्टको ड्रइङ रुम जस्तो लाग्छ । यो बसको नाम फिनेत्जा हो । यसको लम्बाइलाई डेढ मिटरसम्म बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी टाटाको म्याग्ना बस अर्को आकर्षक बस हो । यो बसमा ट्वाइलेट, किचेन, सीसीटिभी, दुईवटा टिभी तथा रिभर्स क्यामेरा छन् । यसका १९ सिट इकोनोमिक तथा १९ सिट बिजनेस क्लासका छन् ।
जेबीएम कम्पनीले ५ मिनेटमै चार्ज हुने इको लाइफ इलेक्ट्रिक बस ल्याएको छ । यो बस फुल चार्जपश्चात् १ सय ५० देखि २ सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्छ । यसको ब्याट्री एकदेखि डेढ घण्टामै फुल चार्ज हुन्छ । बसमा दुईवटा सीसीटिभी क्यामेराका साथै प्रत्येक सिटमा स्टप बटन दिइएको छ ।
अशोक लेल्यान्डले सर्किट एस नामक इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध गराएको छ । यसको ब्याट्री चार्ज गर्न कतै रोकिनु पर्दैन । यो बस एक पटक फुल चार्ज गरेपछि ५० किलोमिटरसम्म चल्न सक्छ । ब्याट्रीको चार्ज सकिए पछि इन्टरचेन्ज स्टेसनमा ब्याट्री परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसको ब्याट्री परिवर्तन गर्न एकदेखि दुई मिनेट मात्र लाग्छ ।
प्रकाशित :फाल्गुन २८, २०७४
नयाँ वर्षको इभमा किन चुम्बन ?
नयाँ वर्ष अनौठो संकल्प
यस्ता स्मार्टफोन आउने छन् यो वर्ष
नयाँ वर्ष नयाँ ऊर्जा
ग्याजेटप्रेमी पुस्ता मंसिर ३०, २०७६
प्रदूषणबाट जोगाउने मेभोक्सको हेलमेट मंसिर २, २०७६
यसरी गर्न सकिन्छ ब्लगबाट कमाइ कार्तिक ६, २०७४
घर बसी–बसी धन कमाउने उपाय कार्तिक ५, २०७४
युट्युब चलाएर लखपति बनौं कार्तिक ३, २०७४
फेसबुकमा कस्तालाई हटाउने, कस्तालाई राख्ने ? असार २७, २०७४
लाइफस्टाइल अनलाइन नेपालमा फाल्गुन २२, २०७३
स्मार्ट शैलीबाट नतिजा असार ११, २०७२
के क्यासलाई राखेर कम्प्युटरको क्षमता बढाउन मिल्छ ? असार ४, २०७२
ओहो बजार एउटा अनलाइन गन्तव्य असार ४, २०७२